Madaxweynaha Jubbaland oo sagootin u sameeyey xildhibaanada labada aqal. – Radio Daljir
Madaxweynaha Jubbaland oo sagootin u sameeyey xildhibaanada labada aqal.
Diseembar 13, 2016 1:46 b 0
Madaxweynaha Dowlada Jubbaland ee Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa Munaasabad heerkedu sareeyo Kismaayo ugu qabtay xubnaha labada Aqal ee laga soo doortay Jubbaland.
Munaasabadan oo sagootin ahayd ayaa waxaa ka qayb galay Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam R”iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalib iyo xubnaha labada gole ee Jubbaland iyo Mudanayaasha la doortay.
Kooxaha Fanka ayaa Munaasabada kayb lixaadle ka qaatay iyadoo heeso iyo Ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka halkaas lagu soo bandhigay.
Gudoomiyaha Gudiga Madaxa banaan ee Doorashooyinka heer Dowlad Goboleed Cabdi Cali Raage ayaa Munaasabada kaga sheekeyay marxaladahii ay soo martay hawsha dhismaha labada Aqal ee Jubbaland laga soo doortay isagoo Dowlada Jubbaland uga mahad celiyay sida ay tageerada ula garab taagnay waxaana uu hoosta ka xariiqay in ay sidii ugu wanaagsanayd hawshu u dhacday oo ay rajaynayaan in Xildhibaanadan ay noqdaan kuwo dalkooda anfaca.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo Munaasabada ka hadlay ayaa ku dheeraday sida ay masuuliyada ay qaadeen uga soo bixi lahayeen Xildhibaanada Cusub wuxuuna husay in ay Jubbaland ku dadaalayso sidii Xildhibaanada deeganku u noqon lahayeen kuwo isku xiran oo hal hadaf leh waxaana uu cadeeyay in taasi ay miro dhashay oo hada ay gudi samaysteen Xildhibaanadu kuwaas oo wixii soo wajaha ay si midnimo leh go’aan uga gaarayaan.
“Waxaan balan qaadayna in aanan caawa idinkaga harin oo aan idin garab istaagno halkan Kismaayo dhul baan idinka siinaynaa oo Dowladu ay guri marti oo aad dagtaan idinkaga dhisto sidii kale Xamar madal ayaad ku yeelanaysaan” ayuu yiri Madaxweyne Axmed Maxamed islaam.
“Waxaan samayn doona labada kun iyo labaatanka in aan Soomaalida kula gorgortano oo aan kula Xisaabtano qaab Xisbi Asxaab ah oo aan ka baxno nidaamkan habka qabiil ku salaysan” ayuu yiri Hogaamiyaha Dowlada Jubbaland.
Xildhibaanada ayuu kula dar daarmay in ay ka fogaadan laaluush iyo wax isdaba marin taas oo xaalka hada dalka uu ku sugan yahay uga sii daraysa.
“Maanta go’aanku idinka ayuu gacantiina ku jiraa waxaad samayn kartaan Tariikh iyo bog Cusub oo aad dhabaha Saxda ah Dalkan ku hagtaan taas oo ah in aad ka dheeraatan Musuq maasuq waana mida Dalkeena u wanaagsan” ayuu yiri Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam
Maxamed Cumar Carte Qaalib Ra”iisul Wasaare ku xigeenka Dalka ahna Mudane katirsan Baarlamaanka Cusub ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay kasoo qayn galka Munaasabadan uuna arko Dowlad iyo dadkeeda oo wada jira gacmahana is haysta wuxuu xusay in Kismaayo ay tahay meel wax Wanaagsan laga baran karo.
Sawirro iyo codad-Ciidanka ammaanka oo Garoowe ku qabtay Khamri gaadiid iyo dadkii watey.
Madaxda madasha qaran oo yeelanaysa shirkii ugu dambeeyey.